Zithini iindleko zokuhlala eOstreliya? - ALinks
Iindleko zokuhlala e-Australia zabaphambukeli zixhomekeka kwizinto ezahlukeneyo. Ezi zinto zinokwahluka kakhulu kwimfuno yomntu ngamnye. Ubungakanani bosapho, isixeko, ubungakanani bokubekwa kwenye indawo, indlela yokuphila, ukutya, kunye nezinye izinto ngokunjalo. Ixabiso eliphakathi lokuhlala e-Australia liphezulu ngokuthelekisa amanye amazwe. Iindleko zenyanga zokuphila zixhomekeke kwezinye izinto ngokunjalo. Njengokurenta, ukutya, ukutya, i-inshurensi, kunye nezinto eziluncedo ezi zinto kufuneka ziqwalaselwe. Ukujonga zonke izinto, indleko eziphakathi zokuphila eAustralia zimalunga. I-AUD 35-40 K. Iindleko zokuhlala e-Australia yenye yezona zinto zikhangelwe kwi-intanethi.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuhambisa imali kwilizwe liphela?
Inketho elula nefanelekileyo yokuhambisa imali phesheya Wise. I-akhawunti elungileyo nexabiso eliphantsi yamanye amazwe. Ungadlulisa imali okanye uyisebenzise phesheya ngexabiso eliphantsi kuneebhanki zesiko. Unokufumana imali yasimahla kwihlabathi liphela. Ungasoloko ulibona elona xesha lokutshintshiselana. A Wise Akukho mali efihliweyo ikhona.
Funda ngakumbi ngokuthumela okanye ukufumana imali apho ufuna khona ngoBulumko.
I-Australia idume kwihlabathi liphela ngemfundo yayo ephezulu. Qho ngonyaka abafundi bamazwe aphesheya beza e-Australia kwizifundo zabo eziphakamileyo. Ukuza kwimirhumo yokufunda ekufuneka ihlawulwe ngabafundi ukuze bafunde apho. Kwamanye amaziko, kuya kufuneka ungenise iifizi zokufunda ngaphambili. Ngaphandle koku amanye amaziko angabiza imali eyongezelelweyo ukongeza kwimirhumo yokufunda. Oku kungenxa yemisebenzi eyenziwa emva kweeyure zesikolo ethe yanyanzeleka. Ukuza kwiindleko ekufuneka uzihlawule ukuze ufumane isidanga se-bachelor. Isidanga se-bachelor sinokukuhlawula naphina phakathi kwe-14,000 AUD ukuya kwi-35,000 AUD ngonyaka. Kwaye isidanga sokuthweswa isidanga siya kuxabisa kwindawo ethile phakathi kwe-20,000 AUD ukuya kwi- $ 40,000 AUD. Iindleko zinokwahluka kwikhosi oyikhethayo kunye nezinye iifizi ngokunjalo.
Iindleko zokuphila e-Australia ziya kwahluka kubafundi nakwabasebenzi. Ukuba ungumfundi unokungasebenzi okanye wenze umsebenzi ngelixa ufunda. Iiyunivesithi kufuneka ziqinisekise ukuba abafundi banegalelo elingaphezulu kwizifundo zabo. Banokuba namava akhuselekileyo kunye nawonwabisayo e-Australia ngokugxininisa kufundisiso kwaye bayonwabele. Nangona abafundi benokuthi bongeze umvuzo wabo ngokusebenza ngokungesosigxina kwilizwe. Urhulumente wase-Australia usethe eminye yemithetho yokufuduka malunga nemali. Umenzi-sicelo okanye ilungu losapho lakhe kufuneka okungenani afumane imali yokuhlangabezana nezi mfuno zeendleko.
Iindleko eziSisiseko zokuHlala
Iihotele kunye neeNdwendwe- I-AUD 90 ukuya kwi-AUD 150 ngeveki
Ukuhlawula undwendwe- I-AUD 85 ukuya kwi-AUD 215 ngeveki
Iihostele ezikwikhampasi- I-AUD 90 ukuya kwi-AUD 280 ngeveki
Irente yeNdlu - I-AUD 165 ukuya kwi-AUD 440 ngeveki
Unokukhangela indawo yokuhlala eOstreliya Apha.
Ezinye iindleko zokuphila
Ukutya okanye iiNtsuku zemihla ngemihla -AUD 80 ukuya kwi-AUD 280 ngeveki
Irhasi nombane -AUD 35 ukuya kwi-AUD 140 ngeveki
Ifowuni kunye ne-Broadband ye-Intanethi -AUD 20 ukuya kwi-AUD 55 ngeveki
uthutho -AUD 15 ukuya kwi-AUD 55 ngeveki
Ixabiso lokuhlala eOstreliya - Izixeko ezi-3 eziphezulu ezixabisa kakhulu e-Australia
Amaxabiso aphakathi (AUD) eSydney, eOstreliya
Irenti (2 BHK): 2299.20 Ukutya umntu ngamnye: 15 - 30 uthutho: Ukudlula kwenyanga ngo-180, igesi i-5.11 / gallon Ukuphila ngenyanga: 3000
Amaxabiso aphakathi (AUD) eBrisbane, eOstreliya
Irenti (2 BHK): 1457.37 Ukutya umntu ngamnye: 17 - 30 uthutho: Ukudlula kwenyanga ngo-150, iGallon yeRhasi 5.24 ukonwabaI-Tiketi ye-Movie 14, Cappuccino 4.62 Ukuphila inyanga nenyanga: 1900
Amaxabiso aphakathi (AUD) eMelbourne, eOstreliya
irente(2 BHK): 1527.21 Ukutya umntu ngamnye: 15 - 30uthutho: Ukudlula kwenyanga ngo-147, iGallon yeRhasi 5.16 ukonwabaI-Tiketi ye-Movie 19, Cappuccino 4.23
Uyifumana njani indlu yakho e-Australia?
Iibhanki ezigqwesileyo eIran
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eTogo?
IiBhanki ezilungileyo kunye neeNkonzo zeMali eSpain
Matshi 12, 2020
Iibhanki ezi-5 eziphezulu eNepal